L ကိုခရီးစဉ် | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > L ကိုခရီးစဉ်
'Are we there yet?' pleads my three-year-old son from the rear of the car. I've returned to the Lake District for the first time since my school trip to Patterdale, back in the early eighties. I'm curious as to what I can recall of the place after all these years, သို့သော်, the sands of time and copious quantities of alcohol play havoc with the old grey matter. I've already decided our next appointment with the lakes will be headquartered at Windermere, hub of the region. A...
စပိန်ရန်သင့် Travels ခံစားခြင်း
စပိန်မှခရီးသွားစဉ်းစား? စပိန် - အဆိုပါရီးယန်းကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင်အနောက်တောင်ပိုင်းဥရောပ၌တည်ရှိသည် - နည်းတူအများကြီးယနေ့အမြဲတမ်းအတိတ်တွင်ရှိခဲ့ပွီးသကဲ့သို့လူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများနှင့်အားလပ်ရက်အစက်အပြောက်တဦးဖြစ်ဆက်လက်. ဒီတစ်ခါလည်းသင်စပိန်နိုင်ငံတွင်သွားရောက်ဘယ်မှာအကြောင်းကိုတွေးတောနေ ... ဒီတစ်ခါလည်းသင်င်း၏သမိုင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနှင့်ဥရောပအနုပညာအတွက်၎င်း၏ကြီးမားတဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတွေ့ကြုံခံစားချင် ... မည်သို့ပင်တို့သည်အသို့သွားရောက်လိုသောအဘို့သင့်အကြောင်းရင်းများ, သငျသညျဆက်ဆက်သူဌေးယဉ်ကျေးမှုကိုခံစားဖို့ခညျြနှောငျနေ, အခွန်ဌာန, သငျတို့သအဲဒီမှာဒီနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်တခါ.
There are some discounted fares and benefit services provided by the southwest airlines for the passengers of the age group of 65 နှင့်ပိုပြီး.
Block Island isarefuge for people and nature. You'll discover towering cliffs, stunning views and some of the best beaches on the New England coast... and without the crowds. You see Block Island takesalittle bit of effort to get there, and this is good news for you, as most people won't take the trouble to take the one-hour ferry ride from the mainland. But it's their loss... and your gain. Block Island isaseaside jewel lying 12 miles off the southern coast of R...
Planningafamily vacation can be difficult, but it'sagreat way to get the family on the same page, looking forward to an enjoyable vacation together. Family vacations areagreat time to bond with the family and forge memorable experiences. The key toasuccessful family vacation is in the planning. Here are some tips for planning your family vacation. ပဌမ, start planning your family vacation well in advance of the actual trip. This can beafun and exciting proce...
Many people in the US would love to travel to Africa foraluxury African safari adventure. Because the North American continent is along way from Africa, most will never book the trip ofalifetime. The experience of Africa should not be missed if at all possible. There is so much to see and do and people can do it all by takingaluxury African safari. There are several companies that have luxury African safaris in many different countries like Botswana, ကင်ညာ, and Namib...
Whenever you get the time and money to takeaspecial trip, you should not rush into the details of planning and makeamistake. ထက်, you should absolutely take your time and plan your trip wisely and with care. One of the biggest mistakes that I have seen many people do over and over when planningatrip is to rush into making their airline reservations. သဘာဝကျကျ, when people first get excited aboutatrip, they start thinking about how they are going to get from here...
Whether itsadriving tour,acruise orabus, leaf viewing isagreat way to spendafall vacation. It's also big tour business and the are many options. As you dream of that hot apple cider onacrisp afternoon doaquick check list before you leave home so you're ready for any type of weather. If you're prepared then all you need to do is focus on havingafun and relaxing time. Start preparing by taking out your favorite sweater. Think "chilly." Pack one that you can u...
Austria hasarich history and has managed to maintain many of the old buildings and architecture that go along with it. The country is small and nestled between Germany, the Czech Republic, ဆလိုဗက်ကီး, and Hungary. The largest city is Vienna, which hasarich cultural history, စားသောက်ဆိုင်, andadiverse cultural mix that resulted from different wars and from the immigration of people from nearby countries. When planningatrip to Vienna, you should consider visiting the cit...
သငျသညျပြည်ပမှာခရီးသွားလာစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်အခြားနိုင်ငံများတွင်ဖုံးလွှမ်းနေလျှင်ကြည့်ရှုရန်သင့်ကျန်းမာရေးအာမခံမူဝါဒကိုပြန်လည်သုံးသပ်. အကယ်. မ, ခရီးသွားအာမခံပေါ်လစီသည်ဝယ်ယူရန်.
ဥရောပခရီးသွားဧည့်သည်အလူကြိုက်အများဆုံးဦးတည်ရာသည်. စိတျထဲမှာထားရန်အကြိမ်ကြိမ်အရေးကြီးသောအရာများကိုသင့်ရဲ့ခရီးသွားအေးဂျင့်ကိုခေါ်နှင့်သင့်လာမည့်အားလပ်ရက် booking မီကရှိပါတယ်: 1. သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်: သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက် Set. ဒီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်နှင့်အမှတ်တရပစ္စည်း / s နဲ့လည်းပါဝင်သည်. သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်သေးငယ်သည်မှန်လျှင်, သငျသညျအရှေ့ဥရောပသွားရောက်သင့်ပါတယ်, ထုပ်ပိုးခရီးစဉ်ကိုရှာဖွေနေ, သို့မဟုတ်, သငျသညျပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နေလျှင်, စာအုပ်တစ်ဦး "နောက်ဆုံးမိနစ်" ခရီးစဉ်ကို, အရာမကြာခဏသင်တို့ကိုကယ်တင်နိုင် 30% သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို. သငျသညျအကြားလက်ရှိငွေလဲနှုန်းအထဲက Check ...
ကျနော်တို့ခရီးစဉ်ကိုယူပြီးကိုချစ်, ကတိုတောင်းတဲ့လမ်းခရီးစဉ်ရဲ့ရှိမရှိ, တချို့ဝေးလံသောထူးခြားဆန်းပြားအရပျသို့လေကြောင်းခရီးဖြင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပိုရှည်ခရီးစဉ်. သို့သော်မကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်နှင့်ရလဒ်အဘို့အစီစဉ်ရန်ပျက်ကွက်ဖို့အားလုံးကိုစိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်မျက်ဒေါသဖြစ်တယ်.
ဒါကြောင့်ကျောင်းဖွင့်ဖွင့်လိုလျှင်, သင့်ရဲ့ကလေးတွေကိုအဘို့ဒါမှမဟုတ်ရပ်ကွက်အတွင်းလေးတွေများအတွက်, ဧကန်အမှန်အမြိုးသားအနေဖြင့်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မည်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပညာရေးဆိုင်ရာခရီးစဉ်များအဖြစ်သူတို့ကိုသင်ပေးဖို့ကောင်းတဲ့သူကဖွင့်. ၏သင်တန်းပြတိုက်သို့မဟုတ်ဒါဒါစက်ရုံမှပုံမှန်ခရီးစဉ်လည်းမရှိ, ဒါပေမယ့်ပညာရေးခရီးသွားသေချာပေါက် destination သည်နှင့်အတူအဆုံးသတ်ရန်ပါဘူး, သင်သည်သူတို့၏ကစားကွင်းထဲကနေသူတို့ကိုနှုတ်မတိုင်မီတဦးတည်းလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအဖြစ်ကလေးကထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်. အဘယ်သူသည်ခရီးစဉ်စီစဉ်သင့်တယ်? အဆိုပါခရီးစဉ်သည်ဆိုပါက ...
သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး Las Vegas တွင် Airfare အတွက်သုတေသနလုပ်နည်း
ငါငါ့အလိုရှိသမျှလေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွေ့အကြုံကနေအမှုအရာစုဆောင်းရန်ကြိုက်နှစ်သက်, ငါလူတစ်ဦး၏ဖွင့်မျိုးပေါ့. ငါ Las Vegas မှ airfare ခရီးသွားခွက်ရှိသည်နှင့်ငါအရမ်းပေါ်ရောက်ခဲ့ဖူးကြောင်းလေကြောင်းလိုင်းများထံမှ knick-knacks တစ်ဦးစုဆောင်းမှုများ. အကြှနျုပျ၏ရေချိုးခန်းငါစုဆောင်းပြီးပြီဆပ်ပြာနှင့်ပြည့်ဝ၏, ငါ့ဗီငါထကောက်ယူပါတယ် plush ရေသုတ်ကုတ်အင်္ကျီနှင့်ပြည့်ဝ၏. အကြှနျုပျ၏ Las Vegas မှ airfare ပျံသန်းတံသင်လည်းသတ္တုတွင်းတစ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း.
Lanikai ခုနှစ်တွင်တည်းခို: သင့်ရဲ့ Options ကိုပြန်လည်သုံးသပ်
သငျသညျ Lanikai တစ်ဦးခရီးစဉ်ကိုယူပြီးစိတ်ဝင်စား, Oahu တွင်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး? သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျပြီးသားသင့်ရဲ့ခရီးသွားအစီအစဉ်များရာ၌ခန့်ထားပြီ, အမည်ရသင့်ရဲ့နေ့ချင်းညချင်းနေရာထိုင်ခင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု? ထိုအသငျသညျလုပ်သေးရှိသည်သောအစီအစဉ်များရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုအားလုံးဆန်းစစ်ဖို့အချိန်ယူချင်စေခြင်းငှါ. သငျသညျဖွယ်ရှိပြီးသားသိသည့်အတိုင်း, Lanikai အလွန်အမင်း rated နှင့်အကြံပြုကောင်းပါသည်. ဒါဟာသူ့ရဲ့အလှအဘို့အလူသိများသည်, အဖြစ်ပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုများ၎င်း၏န့်အသတ်အရေအတွက်က. တကယ်တော့, သငျသညျ Lanikai B ကိုသင်တို့သိရလုပ်ခဲ့တယ် ...
The cigar shop of yesteryear has been increasingly replaced byavirtual version that offers the same wide variety of cigar brands, humidors and accessories, but knows no geographical boundaries and offers products atafraction of the cost. အမှန်ဆိုသည်ကား, online cigar stores have playedamajor role in the cigar boom of the last decade, revolutionizing the industry and making the purchasing of cigars cheap, hassle-free and anonymous.
In the face of fierce global competition, cost efficiencies, and lurking terrorist threats, air travel becameaburden insteadapleasure. ရုတ်တရက်, time isaluxury, flexibility is critical, and safety the utmost priority. The tragic September 11 attacks further reinforced the need to increase security in every airport around the globe. Given these mounting challenges and growing passenger dissatisfaction, corporate jets are here to save the day. ထို့အပြင်, travelers have an ...
"အယ်လ် Prat", Barcelona's international airport, is one of the main gateways into the beautiful country of Spain. It is extremely close to central Barcelona, only fifteen kilometers viaadirect route on the C246 freeway in the direction of Castelldefels. No matter what the day or the season, this isaquick and easy run. Many travelers no longer insist on going to Europe in the summer, since so many bargain flights are available all year long. In conjunction with cheaper fli...
One of the most visited sites in the world today by travelers is Machu Picchu. It is located in Cuzco, Peru in the high Andes Mountains. It is approximately 724 miles away from Lima, the Peruvian capital. A typical trip by land onabus takes about 20 နာရီ. One could also takeaflight and arrive there inaheartbeat of one hour. The starting point usually begins in Lima. The ruins sit surrounded by the Andes Mountains at about 11,024 feet above sea level. The name Machu ...
Traveling can be made enjoyable by planning inabetter way. Whether you are going forabusiness travel or pleasure trip, make sure you have all the necessary items required forapleasant trip. There are so many options today thataperson doesnt always have to useatravel agency. The Internet has made it possible for travelers to savealot of money. တွေအားလုံးကိုအောက်ပါအတိုင်း 10 essential thingsatraveler should possess forapeaceful trip. -Knowledge of Destination : Its always be...
Instead of letting the kids watch DVDs during your next road trip, use those long hours in the car to shapen their minds.
အချိန်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၏တစ်ဦးကစာရေးစုံလင်သောအားလပ်ရက်စီစဉ်ထဲသို့ဝင်. လေယာဉ် booking နှင့်ဟိုတယ်ရွေးချယ်ရာတွင်အပြင်, သငျသညျရောက်လာတစ်ချိန်ကသင်သည်လည်းသင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းမယ့်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရပါလိမ့်မယ်. ခရီးသွားအေးဂျင့်များနယ်လှည့်ထဲကစိတ်ဖိစီးမှုယူနိုင်ပါသည်, သငျသညျတစျဦးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်လျှင်သင်တို့နှင့်အတူအသက်သာရှိပါတယ်. သင့်ရဲ့စံပြခရီးစဉ်စီစဉ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှာဖွေနေသည့်အခါ, သုတေသနနည်းနည်းရှည်သွားနိုင်ပါတယ်. ခရီးသွားအေးဂျင့်ဌားရမ်းသငျသညျမဟုသာမန်အားဖြင့်အလိုတခုတည်းအပေးအယူရဖို့ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် ...
စိန့်. Croix – အခွင့်အလမ်းအမျိုးမျိုးကိုကျွန်း
ပဲစိန့်ရာမှပြန်လာသောဘဲလျက်. Croix, ငါနေဆဲဒီကျွန်းနှင့်အတူဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုထုတ်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေတာ. အဲဒါကိုလျစ်လျူရှုနေနှေးကွေးနေသည်သေခြင်းသေဆုံးဖြစ်ပါတယ်, သို့မဟုတ်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူရောင်ရမ်း & လေးနက်ကြီးထွားမှုအတွက်ကြိုးစားနေပါကြောင်း? ၎င်း၏လက်ရှိပြည်နယ်ဖြစ်စေနိဂုံးတဦးတည်းဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ,. အဲဒီမှာနေစဉ်, ကျွန်မအကြီးအအချိန်ရှိခဲ့, အခြို့သောအံ့မခန်း scuba ရေငုပ်ခံစား, စူပါစျေးနှုန်းများမှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စား, ပင်သမိုင်းနှင့်မိုးသစ်တောတွေကတဆင့်ရှာဖွေနေကျွန်းအများစုမောင်းထုတ်ရန်အချိန်ရှိခဲ့. ဒါပေမယ့်အရာဖြစ်ပါသည်, အများဆုံး EV ...
After you have decided thatavacation rental is the way to go for your annual family vacation, your next step is to be sure that you have all of the necessary items forafun- filled trip. For the most part these home or cottage vacation rentals come equipped with all of the pleasantries of home. သို့သော်, you will still require toiletries, အဝတ်အစား, and basic first aid items. Asaparent not only do you have to ensure that you have all of the things you will need, but you sh...
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူနိုင်ငံတကာခရီးစဉ်စီစဉ်သည့်အခါအသစ်တစ်ခုကိုသင်ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိကြ၏အခါနေမကောင်းရရှိရန်ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်. သင့်ခန္ဓာကိုယ်သစ်ကိုအစားအစာမှချိန်ညှိရသင့်တယ်, ရေထုနှင့်လေထု. ခရီးသွားများ၏စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုနေမကောင်းရဖို့သင်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်စေနိုင်ခြင်း. ဤတွင်သင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်ကိုပိုပြီးပျော်စရာလုပ်ဘို့အနည်းငယ်ကျန်းမာအကြံပေးချက်များများမှာ. သင်လိုအပ်ပထမဦးဆုံးအရာကိုသင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်စီစဉ်ထားတိုင်းပြည်အတွင်းလိုအပ်ကာကွယ်ဆေးများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များကိုအဘယ်အရာကိုမျိုးကိုထွက်ရှာရန်ဖြစ်ပါသည်. သုံးမီတာရှိပါတယ် ...
Derwent ရေ: အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့အိုင်ခရိုင်၏ရတနာ
Perhaps what surprised me more than anything was the number of foreign tongues I heard about town. Keswick was more cosmopolitan than I had imagined. It had moved with the times, but retained many of its old values. Many well-known retailers are present, but Keswick maintains deep roots to ancient past. As appealing as Keswick is however, it's not the main attraction in this part of the world. That title goes toaplace of stunning natural beauty which has inspired artists...
ဂျမေကာရန်လွတ် ‘ Montego ဂလားပင်လယ်အော်စူးစမ်းခြင်း
ဂျမေကာ၏အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး, Montego ဂလားပင်လယ်အော်နိုင်ငံ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်၏. Montego ဂလားပင်လယ်အော်မှာလည်းကာရစ်ဘီယံရဲ့အပူဆုံးနေရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ပျက်. ခရီးသွားဧည့်လေနှင့်ပင်လယ်နားမှာက Montego ဂလားပင်လယ်အော်မှစုပြုံ. အတော်များများကအဓိကရုဇ်လိုင်းများခေါ်ဆိုခများ၏ဆိပ်ကမ်းများဟာသူတို့ရဲ့စာရင်းကိုအပေါ် Montego ဂလားပင်လယ်အော်တို့ပါဝင်သည်. ဟိုတယ်ကြောင်းခရီးသွားများအတွက် '' အစားအစာများသေချာ All-အားလုံးပါဝင်နိုင် packages များပူဇော်, Non-ယမကာ, နှင့်အရက်အဖျော်ယမကာကုန်ကျစရိတ်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်. Montego ဂလားပင်လယ်အော်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကျက်သရေတွေနဲ့ထုပ်ပိုးနေသည်. th ...
နိုင်ငံတကာခရီးသွားလမ်းညွှန်များထိုအအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင် မှစ. ပိုမိုရယူခြင်း
Fayetteville, North Carolina ပြည်နယ်ရှိ
ဟော်လန်ခရီးသွား ‘ အမ်စတာဒမ်, Van Gogh သည်, အန်းဖရန့်
ဇါတ်ရုံ: Ou Vous Rendre pour Votre Lune de Miel.
Norfolk ခုနှစ်တွင် Barnham Broome ဂေါက်ကလပ်မှာအံဝင်ခွင်ကျ-ဂေါက်သီးဖြေရှင်းနည်း
အေသင်, Greece ‘ A Whirlwind of History